Lavitry ny laharam-pahamehan’ny mponina ny politikan’ny mpitondra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Aoka ny rariny hikoriana... il y a 1 heure
Lavitry ny laharam-pahamehan’ny mponina ny politikan’ny mpitondra
Rahary il y a 2 mois
Tontolo mifamahofaho sy hafahafa no mbola iainan’ny firenena ankehitriny amin’izao taona 2020 madiva hifarana afaka herinandro vitsy izao, taorian’ny hamehana ara-pahasalamana volana maro tsy nihodinan’ny asa aman-draharaha sy servisy samihafa teo amin’ny andavanandrom-piainana. Miaina ny dindon’izany ankehitriny ny ankamaroan’ny olona, miatrika ny fahasahiranana samihafa eo amin’ny tontolom-piainana : fihariana, fianaran’ny ankizy, fahasalamana, sy ny sisa.
« Fa mbola misy eto ve izany coronavirus izany ? », hoy ny vazivazin’ny olona mahita fa toa tsy misy miraharaha intsony ireo fepetra fisorohana ity areti-mandoza ity. Hita taratra izany amin’ny fivezivezen’ny olona maro sy ny fitohanan’ny fifamoivoizan’ny fiarakodia ao an-drenivohitry ny Nosy ao. Ilay CVO nambara fa hamonjy an’izao tontolo izao anefa tsy re tohiny fa ny fanafarana vaksiny indray aza no re siosio, satria toa hoe efa an-dalana ny fahitan’ny firenen-dehibe izany. « Mahazendana ny zava-misy », hoy ny olom-pirenena tsotra.
Ny maha ao anaty hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny firenena anefa no nifarana, fa mbola tazonina ny fepetra samihafa hisorohana ny aretina ‘coronavirus’ izay mbola tsy fongotra tanteraka raha ny antontanisa fantatra tamin’iny herinandro lasa iny. Hatramin’ny 18 novambra, dia 31 ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana 742 natao, 65 no sitrana, ary 433 ireo manaraka fitsaboana. Niampy iray ny namoy aina ka lasa 251 izany hatramin’ny fiandohan’ny aretina tamin’ny 19 marsa. Miisa 17 341 ireo trangan’aretina ka ny 16 657 no sitrana, ary 93 734 no fitiliana natao. Maneran-tany, maherin’ny 59 tapitrisa ny tranga ka ny 38 tapitrisa mahery no sitrana, ary maherin’ny 1,4 tapitrisa no namoy aina.
Anisan’ny voa mafy ny any Etazonia sy ny any Eoropa, mahatonga ny fanamafisam-piarovana any satria miverina indray ilay fihanaky ny “coronavirus”amin’ny sasany amin’izy ireny, miditra amin’ny atao hoe “2ème vague”. Fa ny eto amintsika toa mampametra-panontaniana ny olona ny ohatra miainga avy amin’ny fitondram-panjakana. « Lazaina fa mbola mihidy ny sisin-tany kanefa ny mpitondra antsika mivoaka miditra ny sisin-tany sy mamory olona mihoatra ny 200 ! Hatramin’ny artista avy any Afrika atsimo aza no tafiditra teto ary nitety faritra namory vahoaka tamin’iny herinandro iny », hoy ny fanamarihan’ny olona. « Tsy ho niditra teto ireny vahiny ireny raha tsy nahazo alalana avy amin’ny mpitondra fanjakana », hoy ny mpandinika fiarahamonina iray. « Hanampena-maso ny vahoaka tsy hisaina ny fahasahiranana tsy voavaha ve ireny sa dia talentan’ny mpitondra tokoa ny mamory vahoaka amina fikarakarana lanonana ? Sa inona no tena tanjon’izany ? », hoy hatrany ny fanamarihana re.
Ny mazava aloha hatreto dia malama vava ny tompon’andraiki-panjakana raha ny fampanantenana hanao an’izatsy sy izaroa no itarafana azy. “Talentan’ny mpitondrantsika ny mampandry adrisa ary revon’izany ny maro”, hoy ity renim-pianakaviana iray. Iray amin’ny ohatra azo raisina ny amin’ny fepetra any amin’ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Tsy nisy mihitsy raha ny marina ny tena fahatanterahan’ny hoe nomena ‘gel’ sy aron’akanjo ireo taksibe tao an-drenivohitra tamin’ireny fotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana ireny. “Tsy afo mololo akory, fa tsy nisy mihitsy !”, hoy ny nambaran’ny resevera iray. Nampanantenain’ny mpitondra anefa izany, fa dila ihany ny fotoana nomena, ary nofaranana ny hamehana ara-pahasalamana. Aiza ho aiza ankehitriny ny zava-misy amin’ny fiara fitateram-bahoaka ? Na ilay seza telo isaky ny laharana aza, maro no tsy mahaja izany, ny fanaovana maska tsy misy miraharaha firy, ny elanelana iray metatra dia nofy.
Politika mambotry firenena
Manakaiky fotoanan’ny maitso ahitra isika ankehitriny, vanim-potoana mahasahirana ny mponina amin’ny famatsiana sakafo, olana tsy voavaha mandraka ankehitriny satria tsy tena mazava ny politikan’ny famokarana hampivoarana ny isam-paritra, ao anatin’izany ny resaka kere any atsimo, toa lasa fitaovana politika. Tsikaritra fa mitombo ny vidim-bary eny an-tsena, tafakatra hatrany amin’ny 700 ariary ny kapoakan’ny vary ao an-drenivohitra ary hatrany amin’ny 1000 Ariary aza amin’ny faritra sasany. “Mitohy hatrany ny aferam-bary mampanankarena antokon’olom-bitsy ka tsy atao mahagaga izay fiakaram-bidiny izay”, hoy ny mpahalala. Zavatra hafa tokoa no mahamay ny fitondram-panjakana raha ny zava-misy, dia ny fametrahana mpitantana azony baikoina hifehezana bebe kokoa hatrany ny fanjakana. Tsikaritra fa saika misy mandrakariva ny fanendrena mpitantana ambony isaky ny filan-kevitry ny minisitra: tale samihafa ary hatramin’ny toeran’ny tokony ho olom-boafidy aza. Mpandinika fiarahamonina iray aza dia nilaza hoe: “Mahavaka saina ange ilay resaka hoe ‘budgetivore’ ny Antenimieran-doholona kanefa raha resaka isa ve, tsy ny ao amin’ny Antenimieram-pirenena aza no tena izany ? Amin’ny saina tsy miangatra sy araka ny isan’ny mponina, mifandanja ve ny loholona 18 sy ny depiote 151?” Ilam-pandinihana avokoa raha ny marina ny isa mandrafitra sy tena ilaina amin’ireo rafitra parlemantera ireo. Resaka diso fipetraka ihany manko ilay hoe “Senat sa Oniversite ?” nambaran’ny filoham-pirenena, satria rafitra natao handrindra ny ‘senat’ ary tsara ny manana oniversite mihodina tsara amin’ny maha oniversite azy, ny oniversite efa eo anefa iaraha-mahalala ny olana misy ao aminy. Fa ny mazava kosa dia taratr’ilay lalàm-panorenana sadasada, araka ny efa nomarihan’ny mpandinika, izao zava-misy izao, ka anjakan’ny fandikan-dalàna samihafa. Eo anatrehan’izany anefa, tsy milamina ny famatsiana jiro sy rano ilain’ny mponina, mampikaikaika ny tsy fandriam-pahalemana, sahirana ny ray aman-dreny amin’ny fizakana ny fampianarana ny ankizy, ary sahirana mafy izay marary noho ny fanafody midangam-bidy aok’izany. “Aza mba marary ihany”, hoy ny senton’ny miaina ny fitsaboana any amin’ny hopitaly, misaina ny hahazoana ny lisitra lava asaina vidiana.
Tsy laharam-pahamehana mitondra fiovam-piainana sy fampivoarana ny maha olona hatreto no mihatra. Samy hafa ny laharam-pahamehan’ny mpitondra sy ny vahoaka, ary lavitry ny fikatsahana ny soa iombonana sy mampilamina ny politika iainana. Ary ny tena loza, dia ilay vahoaka maro an’isa hatrany no mizaka ny tsy eran’ny aina amin’izany rehetra izany. Tsy misitraka ny zo fototra samihafa ilain’ny maha olona ny maro. Sanatria ve politika avo lenta mambotry ny firenena no mihatra eto ka tsy ny soa iombonana ho an’ny vahoaka no itodihana fa ny an’izay ifandraisan-tendro any ivelany any ? Dia manjaka ny samy mandeha samy mitady itrangan’ny tsy rariny sy fanararaotana samihafa !
Fanambaran'ny FFKM : Aoka ny rariny hikoriana... - il y a 1 heure